२२ वर्षपछि आएको मेलम्ची अब आउला कि नआउला ? - bampijhyala.com
Home > पत्रपत्रिका > २२ वर्षपछि आएको मेलम्ची अब आउला कि नआउला ?
२२ श्रावण २०७८, शुक्रबार ०८:५२ bampijhyala
बाँपीझ्याला, काठमाण्डौं । दुई दशककोप्रयासपछि काठमाडौं उपत्यकामा आएको सिन्धुपाल्चोकको खानेपानी फेरि अनिश्चित बनेको छ । निर्माण थालिएको २२ वर्षपछि गत १५ चैतदेखि मेलम्चीको पानी काठमाडौं उपत्यकामा झरेकोमा बाढीका कारण अनिश्चित बन्न पुगेको हो ।
ऐतिहासिक पर्व इन्द्रजात्रा अवधिभर काठमाडौँका भित्री क्षेत्रमा सवारी निषेध २२ श्रावण २०७८, शुक्रबार ०८:५२
निक्षेपको ब्याजदर नै दोहोरो अंकमा २२ श्रावण २०७८, शुक्रबार ०८:५२
सम्पादकियः विशेष आज असोज १, बाँपिझ्याला अनलाईन पत्रिका संचालनको एक बर्ष २२ श्रावण २०७८, शुक्रबार ०८:५२
पानी गौँथलीको ठूलो बथान भेटियो २२ श्रावण २०७८, शुक्रबार ०८:५२
सम्पादकियः विशेष थनु असोज ला तिथी १, बाँपिझ्याला अनलाईन पति हिल्केय दाक्षि दँ २२ श्रावण २०७८, शुक्रबार ०८:५२